တရုတ် ASME လုပ် SA-106 / လုပ် SA-106M-2015 ကာဗွန်သံမဏိပိုက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | ရွှေ Sanon
စံ: ASTM SA106
grade Group မှ: GR.C စသည်တို့ GR.A, GR.B,
အထူ: 1 - 100 မီလီမီတာ
ပြင်အချင်း (က Round): 10 - 1000 မီလီမီတာ
အရှည်: Fixed အရှည်သို့မဟုတ်ကျပန်းအရှည်
ပုဒ်မ Shape: က Round
ကုသမှု Surface: ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဖြစ်
technique: Hot ရှင်းပြီ
အပူကုသမှု: Annealing / ပုံမှန်
အသုံးပြုမှု: ဆောက်လုပ်ရေး, အရည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
စမ်းသပ်ခြင်း: Insight web studio ၏ / CNV / NDT
အရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်အခြေခံအဆောက်အဦးသံမဏိ၏ grade: GR.A, GR.B, GR.C
အဆင့်တစ်ဦးက အဆင့်ခ grade ကို C
ကာဗွန်, max ကို 0.25A ၀.၃ ဘီ ၀.၃၅ ဘီ
မန်းဂနိစ် 0.27-0.93 0.29-1.06 0.29-1.06
phosphorus, max ကို 0,035 0,035 0,035
ဆာလဖာ, max ကို 0,035 0,035 0,035
ဆီလီကွန်, မိ ၀.၁၀ ၀.၁၀ ၀.၁၀
Chrome က, maxC 0,40 0,40 0,40
ကြေးနီ, maxC 0,40 0,40 0,40
နီကယ်, maxC 0,40 0,40 0,40
ဗန်နာဒီယမ်, maxC 0,08 0,08 0,08
အဆိုပါသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာဗွန်အများဆုံးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 0.01% တစ်ခုချင်းစီလျှော့ချရေးများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပါသတ်မှတ်ထားတဲ့အများဆုံးအထက်တွင် 0.06% မန်းဂနိစ်တစ်ခုတိုး 1.35% ဦးရေအများဆုံးမှတက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။
B ကမဟုတ်ရင်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောမရှိပါကအဆိုပါသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာဗွန်အများဆုံးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 0.01% တစ်ခုချင်းစီလျှော့ချရေးဘို့, သတ်မှတ်ထားသောအမြင့်ဆုံးအထက် 0.06% မန်းဂနိစ်တစ်ခုတိုး 1.65% ဦးရေအများဆုံးမှတက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။
ပေါင်းစပ်ကို C အဲဒီငါးခု element တွေကို 1% ထက်မကျော်လွန်စေရမည်။
ဆန့ခွန်အားမိ, psi (MPa) 48 000 (330) 60 000 (415) 70 000 (485)
အထွက်နှုန်းခွန်အားမိ, psi (MPa) အသက် 30 000 (205) 35 000 (240) 40 000 (275)
၌တည်၏။ (50 မီလီမီတာ), မိ2မှာ elongated%
အခြေခံပညာအနည်းဆုံး elongated transverse ချွတ်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အပြည့်အဝအပိုင်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးအားလုံးသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားများအတွက် 35 25 30 ၁၆.၅ 30 ၁၆.၅
ဘယ်အချိန်မှာစံလှည့်လည် 2-၌တည်၏။ (50 မီလီမီတာ) gauge အရှည်စမ်းသပ်မှုနမူနာကိုအသုံးပြုသည် 28 20 22 12 20 12
longitudinal ချွတ်စမ်းသပ်မှုများအတွက် တစ်ဦးက တစ်ဦးက တစ်ဦးက
transverse ချွတ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီ 1/32-အတွက်တစ်နှုတ်ယူခြင်းအဘို့။ 5/16 အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနံရံအထူအတွက် (0.8 မီလီမီတာ) ကျဆင်းခြင်း။ (7.9 မီလီမီတာ) အောက်ပါရာခိုင်နှုန်း၏အခြေခံနိမ့်ဆုံး elongated ထံမှလုပ်ရမည် ၁.၂၅ ၁.၀၀ ၁.၀၀
2 မှာတစ်ဦးကနိမ့်ဆုံး elongated အတွက် (50 မီလီမီတာ) အောက်ပါညီမျှခြင်းကဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မည်။ :
အီး = 625000A 0.2 / ဦး 0.9
အီး = 1940A 0.2 / ဦး 0.9
။ အတွက် (50 မီလီမီတာ),%2အတွက်ကe= နိမ့်ဆုံး elongated, အနီးဆုံး 0.5% အထိဝိုင်း,
သတ်မှတ်ထားသောအပြင်ဘက်အချင်းသို့မဟုတ်အမည်ခံအပေါ်မှာအခြေခံ, တစ်ဦးကအဆိုပါတင်းမာမှုစမ်းသပ်မှုနမူနာများ၏ Cross-Section ဧရိယာ = in.2 (mm2) အပြင်ဘက်အချင်းသို့မဟုတ်အမည်ခံနမူနာ width နဲ့သတ်မှတ်ထားသောနံရံအထူသတ်မှတ်ထားသော, အနီးဆုံး 0.01 in.2 (1 mm2) ကိုဝိုင်းပါတယ်။ (ထိုဧရိယာအရှင်တွက်ချက်သည်မှတူညီသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ် 0.75 in.2 (500 mm2) ထက်, ထို့နောက်တန်ဖိုး 0.75 in.2 (500 mm2) ကိုအသုံးပြုရလိမ့်မည်။ အကယ်. ), နှင့်
ဦး = ဆန့အစွမ်းသတ္တိကိုသတ်မှတ်ထားသော, psi (MPa) ။
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများသေချာအပြင်, hydrostatic စမ်းသပ်မှုတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းဖျော်ဖြေနှင့်ရုတ်တရက်နှင့် flattening စမ်းသပ်မှုဖျော်ဖြေနေကြပါတယ်။ ။ ထို့အပြင် microstructure စပါးအရွယ်အစားနှင့်အချောသံမဏိပိုက်၏ decarburization အလွှာများအတွက်အချို့သောလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: ASTM လုပ် SA-106 သံမဏိပိုက်၏တစ်လလျှင်အဆင့် Per 1000 တန်
Bundles ခုနှစ်တွင်နှင့်ခိုင်ခံ့သောသစ်သား Box ကိုခုနှစ်တွင်
7-14 ရက်အတွင်းစတော့ရှယ်ယာများတွင်ပါလျှင်, 30-45 ရက်အတွင်းအသီးအနှံမှ
မျက်မှောက်မှာ 30% depsoit, 70%, L / C သို့မဟုတ် B / L မိတ္တူသို့မဟုတ် 100% L ကို A / C
GB ကို / T5310-2017
ယခင်: ချောမွေ့စွာအလတ်စားကာဗွန်သံမဏိဘွိုင်လာနဲ့ Superheat ပြွန် ASTM A210 စံ
လွိုင်းပိုက်ပေးသွင်း , 40crmo အလွိုင်းသံမဏိပိုက် , P22 အလွိုင်းသံမဏိပိုက် ,